Soo dejisan WPS Office 9.5.3.2273 – Android – Vessoft
Soo dejisan WPS Office
WPS Office – software ah in ay la documents oo kala duwan u shaqeeyaan. software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan dokumentiyada qoraalka, barasantigareeyaan, bandhigyo qoraalo ama caadiga ah. Xafiiska WPS taageertaa badan oo qaabab faylka, oo ay ku jiraan PDF iyo qaabab Microsoft Office. software ka kooban yihiin dhammaan qalabka lagama maarmaanka u ah waraaqaha shaqo maalmeedka. Xafiiska WPS kuu ogolaanayaa inaad si uu u furo files in ay ku kaydsan ee storages daruur kala duwan. Sidoo kale software ka taageertaa print ee files isticmaalaya xiriir wireless.
WPS Office Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... Uplay 1.3.26